Qe’ee Ofii Irratti Falmatanii Dhuunfachuu ykn Wareegamuun Kabaja Guddaa Dha! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQe’ee Ofii Irratti Falmatanii Dhuunfachuu ykn Wareegamuun Kabaja Guddaa Dha!
Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBOn) humna weerartuu impaayera Itoophiyaa bakka hedduutti adabaa jira. Uummatni Oromoos WBO waliin hiriiruun, ukkaamsaa waraanaa weerartuu diigee warraaqsa dhoosuun, Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) gara rarraga injifannootti qaqqabsiisuuf dirqama qabaachuu hubatee jira. Haala kanaan ilmaan Oromoo; jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo, Qeerroon Bilisummaa Oromoo, jaarmiyaaleen siivikii Oromoo, Hayyooti Oromoo, Miidiyaaleen Oromoo fi ilmaan Oromoo murnoota hawaasaa hunda keessatti hammatamanii jiran tokkummaadhaan ka’uun, sirna nafxanyaa kan akka saree maraatuu qe’ee namaatti bobbaafamee nama fixaa jirutti xumura itti tolchuun yeroon isaa amma ta’uun hubatamee jira.
Ammas Warraaqsa kana galmaan gahuuf caasaa PP kan uummata keessa maadheeffatee loltuu PPf odeessa kennuun, saba keenya ajjeesaa jiru ciranii of-keessaa buqqisuun dirqama keenya isa guddaa akka ta’ee fi bakka isaas mootummaa uummataa kan wal-quba qabeenya ABO-WBOn dhaabbatuu ijaaruun dirqama lammii hundaa akka ta’e ibsa KQ-WGU sadaasa 6, 2020 ‘Yeroon biyya ofii itti dhuunfatan amma!’ fi sadaasa 14, 2020 ‘Saadasni baatii diddaati, Gootota Abboota keenyaa fi qeerroo bilisummaa Oromoo diddaa irratti kufaan yaadataa, nus garbummaa sadaasa of-irraa hin dabarsinu!’ jedhu dhaammatanii ture.
Sadaasa 19, 2020 uummati Oromoo waamicha Warraaqsa kanaaf owwaatee Fincila gaggeessuu itti fufee jira. Baha Oromiyaa magaalaa Harar aanaa Dirree Xiyyaaraa Hassan Geeyitti, Hirnaa, Awadaay fi Qarsaa keessatti geggeeffame irratti waraanni koloneel Abiyyii ilmaan Oromoo ajjeesuu itti fufee jira, Osmaan Ahmed Ibraahiims Awadaay ganda Bashirii keessatti ajjeefamee jira. Ilmaan Oromoo hedduus miidhamni irra gahaa jira.
Abiy Ahimed lola amma Kaaba Impaayeratti gaggeeffamaa jiru dahoo godhatee gaaffii Oromoo ukkaamsuu fi dagachiisuu barbaada. dhiibbaan lola kaaba Itoophiyaatti adeemaa jiru kun raafama siyaasaa garboomsaan Oromiyaa keessatti itti jiruu irraa damdamachuuf Oromoo ittiin afaanfaajjeessuuf dhimma itti bahaa jira. Haa tahuutii garuu lollii kaaba impaayera Itoophiyaatti adeemaa jiru kun uummata Oromoof balaa qabatee dhufuu waan qabuuf lammiin Oromoo tokkollee irra qooda fudhatuu dhiisuun, inumaa rakkoo saba Oromoo muudataa jiruuf wabii yeroon itti dhaabbataan amma tahuu qaba. Lolli Kaaba Xoophiyaatti gaggeeffamu lola qe’ee namaatti deemanii dhumachuu waan ta’eef Oromoon qe’ee isaa irratti akka abbaa ta’u falmaa gaggeessee biyya isaa dhunfatee seenaa hojjechuun gabrummaatti xumura tolchuu qaba.
1. Oromoon sirna nafxanyaa awwaaluuf caasaa nafxanyaa Oromiyaa keessa jirtu of keessaa qulqulleessuu irratti akka bobbahu, akkasumas nafxanyoota hidhannoo qaban irratti tarkaanfii fudhatuun irraa hiikkatu, kuusaa meeshaa nafxanyootaa tohatu, namoota nafxanyootaaf ergamanii fi basaasan, miseensota PP Oromiyaa keessaa qulqulleessun murteessaa ta’uu ajajaan ol’aanaa WBO qajeelfama kenna.
2. Hojjattootni mootummaa tajaajila uummataaf kennuu itti fufuun, sirna PPf meeshaa siyaasaa tahuu fi qabeenyaa kamuu dhimma waraana PP gargaaruuf akka hin baasne fi qabsoo uummataa cinaa hiriiruun caasaa PP diiguuf qooda isaanii akka kennaan ajajaan ol’aanaa irra WBO deebihee dhaama.
3. Ilmaan Oromoo waraana impaayera Itiyophiyaa keessa jirtan, poolisii fi milishaa dabalatee qawwee isin harka jiru qabattanii Weerartuu nafxanyaa naannoo Amaaraa irraa Oromiyaatti duulaa jirtu uummata keessan irra akka ittistanii fi haleeltan, akkasumas qawwee keessan nagaa Oromiyaa tiksuuf akka oolchitan dhaammanna.
4. Uummatni Oromoo guddeessi, sirna nafxanyaa PPn gaggeeffamu kanatti xumura gochuuf hiriira mormii, uggura dinagdee, caasaalee diinaa saaxiluu fi ugguruu keessatti kallattii hundaan cimsuun sirna cabaa jiru kana akka lamuu hin deebinetti awwaaluuf, sirna haaraa mootummaa uummataan ijaarramee, uummataaf tajaajilu dhaabbachuun dirqama ta’uu irra deebinee hubachiisna.
5. Ololli diinoonni keenya kallattii hedduun of jajjabeessuuf gaggeessitu jabina qabsoo keenya irra madda waan ta’eef, WBO hanga dhumaatti abdachaa, osoo libsuu ijaaf of duuba hin deebine, akeeka impaayera nafxanyaa kanatti xumura tolchuuf harka wal qabannee ka’uun yeroon isaa amma!
Warraaqsi Galaana Uummataa Itti Fufa!
Sadaasa 21, 2020
Ajajaa olaanaa ABO-WBO irraa
Goota Abbaan dhalche Gumaa hin nyaatu.
Asaffaa Kushi jedhama
Gumaa abbaa isaa baasee waraana PP mootummaa itoophiyaan Mana hidhaatii baasanii Ajjeesanii Gatan. Dhiira Seenaa Gaarii hojjatee Du’e,
Seenaan si yaadata.
Akka sa’aatti mar’atanii du’uurra,
Akka leencaatti baroodanii du’uu wayya!
#Asaffaa Kuush jedhama.Dhalataa godina Salaalee aanaa dharraati.Aanaan dharraa goojjamiin wal daangessiti.Aanaa sana keessa qubattoota amaaraatu heddummata.#Nafxanyoonni abbaa isaa ajjeesanii bineensa nyaachisanii,guyyaa kudha sagalitti morma ol qofa akka argate dubbata.Asaffaan haaloo abbaa isaa baasuuf,namoota shanii ol akka ajjeese dubbata.firoottan isaa illee sababa kanaan akka ajjeefaman dubbata.
Goonni kun harka poolisii bu’ee,yeroo isaan qoratan illee nama sodaa tokko malee,waan raawwate hime.Goota hin ajjeesani ni jabeeffatu malee.Namni kun gumaa abbaa isaa baafachuun waanuma ilma dhiiraa tokko irraa eegamudha.Hanga fedhe yakka hojjetu illee,seeraan itti murteessisuun osoo jiruu.Oromummaa isaan dhiibbaa irratti godhanii ajjeesan.Goonni goota hin ajjeesu.Dabeessatu goota ajjeesa.Dharraan dachee oromoo ilmaan #Nafxanyaan liqimfamtee jirtudha.Biyya afaan amaaraa qixa oromiffaa itti dubbatamudha.Dhiirri kun nafxanyaa walakkaa taa’ee gootummaan nama of kabachiise.Halkan kaleessaa mana hidhaa #Fiichee keessaa baasanii,ajjeesanii bakka laga #Jammaa jedhamutti gatani.
Ilma dhiiraa lubbuu kee jannataan haa qananiisu.